Ọrụ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOT
Ihe ndi oru Chamber
Ụlọ Nkwupụta Okwu
Hypobaric - Elu
Okpokoro Mgbu Ogbugba
Kedu ụlọ nke Hyperbaric?
Okwu otutu okwu
MODE 6000 SL
MODE 6000 DL
MODE 7200 SL
MODE 7200 DL
MODE 8400 DL
AKWỤKWỌ NDỊ MOBILE
Ndị na-agagharị agagharị
Ndị Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ahụ Ike
Ọkachamara Ọkachamara Ọkachamara
Kpọtụrụ USA Sales
Ebe obibi Chamber
TEKNA Mee Ihe Ngwọta
Ọrụ Hyperbaric na-enye ekele - Hyperbaric Oxygen Treatment HBOT
Home/Ọrụ Hyperbaric/Ọrụ Hyperbaric na-enye ekele - Hyperbaric Oxygen Treatment HBOT
Ọrụ Hyperbaric na-enye ekele - Hyperbaric Oxygen Treatment HBOTtekna_mod2018-01-02T13:51:59+00:00
Ọrụ Hyperbaric na-enye obi ụtọ
Ndị bịara na Business a Hyperbaric ọgwụgwọ nzukọ ọmụmụ
Ntube Njikọ nke Njikọ maka ebe obibi a chọrọ
"Ụlọ ahịa nke Hyperbaric Agwọ" Ụlọ Nzukọ maka ndị na-atụle ịmalite ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ HBOT na-agafe agafe. A na-emekarị ọmụmụ ihe na ngwụsị izu na nso Tampa Florida. Ndị na - emepụta ihe na - emepụta ihe na - adịbeghị anya PA & Lateral na - adịbeghị anya nwere ike ịnweta nkwupụta dị elu na klas A na Class B HBOT Systems. Ọ bụrụ na ị nwere 5 ma ọ bụ karịa mmadụ, anyị ga-eweta seminar na saịtị gị.
POCD (Ebe Njikọ Njikọ) ọ bụrụ na ị na-enye anyị nchịkọta digitized nke ụlọ ị chọrọ ịme, anyị ga-enye gị POCD na-egosi ihe achọrọ iji rube isi na NFPA 99-2015 National Fire Codes na Med-Gas Plumbing.
Dị ka okwu mmalite Ọrụ TEKNA Consulting anyị ga-enye gị nchịkwa ndị metụtara na akara aka ahịa gị.
Nyocha ahia na Marshall Fire na-eme iji kwụsị nsogbu na nhọrọ saịtị maka ọrụ HBOT.
Nnyocha Nyocha A Na-enyocha Site gosi na saịtị dị mma maka ọrụ HBOT ma na anyị chọrọ FDA Ezi Ntupụta Ọrụ Ntuziaka.
Ọnụahịa kacha mma na ọnya mmiri anyị enyere ọtụtụ ndị ahịa anyị aka ịchọta ọnụahịa kachasị asọmpi na mmiri ọgwụ ikuku oxygen.
"Ọzụzụ Nlekọta Ọrụ" ejiri ihe niile anyị na-arụnye na-enweghị ọnụ. A na-enye ndị ọrụ gị niile akwụkwọ ikike ka ha na-aga ọmụmụ ihe zuru oke. A naghị enye ndị na-esonye na ọzụzụ ọzụzụ.
Achọrọ enyemaka ịhọrọ Ụlọ Gị Zuru Okè?
Jụọ onye ọkachamara!
Ọ bụghị ebe ị na-ahụkarị. Ihe niile gbasara Tekna 7200 na-ekwu na ngwá ọrụ ahụike dị elu.
Mmadụ isii ahụ Igwe otutu usoro ị na-ewuru anyị na 2009 na-aga n'ihu na-enwe ntụkwasị obi ma na-akwụ ụgwọ dị irè iji rụọ ọrụ.
Roy Schmidt - Ụlọ Ọrụ Hyperbaric TN
Ụlọ anyị anaghị emeghe. Ọ bụ na 15th afọ nke ọrụ, na anyị nwere mgbe ụbọchị.
Jay - Onye nwe - Director nke Ịrụ Ọrụ
Tekna 4000 dị mfe iji. Ịmụta otú e si eji ya emeghị mgbalị ọ bụla. Ọ dị oke mma!
N'ụlọ Tekna, ndị ọrịa anyị na-ekwukarị otú ha si ebi ndụ.
Hugo - Onye na-arụ ọrụ ụlọ
Ụlọ Tekna bụ enyi na-arụ ọrụ ma nwee nchebe na mgbapụ niile.
Ebe ọ bụ na iwu mbụ anyị nke atọ Monoplace Chambers na 2000 anyị zụrụ ihe karịrị $ 1 Nde dollar nke HBOT Systems si Tekna.
Anyị Ụlọ Hyperbaric dị egwu! Ọ dị mma karịa ka anyị tụrụ anya ya!
Anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu na àgwà, ọrụ, na ntụkwasị obi nke Ụlọọrụ 6000 Multilay Ụlọ nke anyị abụọ.
Ndị ọrịa anyị niile hụrụ ụlọ Tekna n'anya. Ọ dị ezigbo mma ma dị mma.
Ndị ọrịa na-eche na ụlọ Tekna dị jụụ, ha hụkwara ọnụ ụlọ ahụ n'anya.
E wuru ụlọ anyị na arụnyere na 2002. Ọ bụ ọrụ ọrụ. Anyị enwebeghị nsogbu ọ bụla.
Ngwakọta 4000 bụ Ụbụrụ kachasị mma nke m hụtụrụla.
Anyị nwere ọkachamara na-echere inyere gị aka!
Jide n'aka tinye Aha gị, Nọmba ekwentị, yana adreesị Email, anyị ga-azaghachi ozugbo o kwere mee. Daalụ!
Enwere m mmasị na: (Lelee ihe niile metụtara)
Ụlọ nke Monoplace
Igwe otutu otutu ulo
Ego ulo oru
Ụlọ ndị dị na ya
Ụlọ ndị a na-ebugharị
Ọrụ Ụlọ Chamber
Ọdịdị Ụlọ Ọgwụ Hyperbaric
Ndị Nlekọta Ahụike Ọrịa / O2 Generators
Ihe ọghọm dị na "Mild Hyperbarics"
AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua na BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius na SabaBosnia na HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic nkeCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatini (Swaziland)EthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern n'ókèalaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiNụrụ na McDonald Islandsnsọ LeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle nke MmadụIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJọdanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLao Ndị Mmadụ Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent na GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé na PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard na Jan Mayen IslandsSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUmu Umu Obere Umu nke AmerikaUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Jụọ ndị ọkachamara
Ala a bụ maka ebumnuche nkwado ma a ghaghị ahapụ ya n'enweghị agbanwe agbanwe.